Kooxda Chelsea oo Ku Dhawaaqday In Baba Rahman oo ku Biiray Naadiga ka dhisan Dalka Jarmalka | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Chelsea oo Ku Dhawaaqday In Baba Rahman oo ku Biiray Naadiga ka dhisan Dalka Jarmalka
Kooxda Chelsea oo Ku Dhawaaqday In Baba Rahman oo ku Biiray Naadiga ka dhisan Dalka Jarmalka
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-08-16 11:04 AM Kooxda Schalke ayaa la soo wareegtay daafaca Baba Rahman oo ka tirsanaa kooxda Chelsea isagoo heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah ugu ciyaari doona.
Xiddiga caalamiga ah ee Ghana ayaa maray tijaabada caafimaadka kooxda Bundesliga Axadii, ka hor inta uusan gaarin Geramany talaadadaii, iyadoo lacag lagu sheegay €500,000 ay kubixin doonaan Amaahdiisa kooxda Antonio Conte.
Rahman ayaa kaga soo dhaqaaqay kooxda Chelsea Augsburg August 2015 markasoo heshiis shan sanno ah qalinka uu ku duugay, ka dib markii £14 million kusoo qadatay Bules.
Laakiin 22-sano jirkaan ayaa kaliya 11 kulan oo Premier League ah kusoo bilaawday isagoo laga saaray Ololaha Conte xili ciyaareedka dambe u diyaariyay Stamford Bridge .
War kooban oo ay Chelsea si qoraal ah u beenisay ayay ku sheegtay manta oo Arbaco ah in si rasmi ah heshiiska uu u dhacay.